I-China Monoblock yoLawulo lweVenive SD11 Imveliso kunye neMveliso | Junbao
Umsebenzi olula, ohlanganisiweyo kunye noxanduva olusindayo uyile iivalves ze-monoblock ukusuka kwi-1 ukuya kwi-6 yamacandelo e-hydraulic and open system evaliweyo. Ifakwe ngevalve yokuphumla yoxinzelelo kunye nevali yokujonga umthwalo. Iyafumaneka ngokufana okanye isekethe yothotho. .Amandla okhetho ngaphezulu kwezibuko (kuphela kwisekethe elinganayo). . Ububanzi be-20 mm - 0,79 kwii-spools eziguqukayo. .Iintlobo ngeentlobo zamazibuko enkonzo kunye neevawuthi zesekethe. .Incwadi ekhoyo, i-pneumatic, hydraulic, i-hydro-hydraulic kunye nokude kunye nentambo eguquliweyo yeentambo ...
Ifakwe ngevalve yokuphumla yoxinzelelo kunye nevali yokujonga umthwalo.
Iyafumaneka ngokufana okanye isekethe yothotho.
.Amandla okhetho ngaphezulu kwezibuko (kuphela kwisekethe elinganayo).
. Ububanzi be-20 mm - 0,79 kwii-spools eziguqukayo.
.Iintlobo ngeentlobo zamazibuko enkonzo kunye neevili zesekethe.
.Incwadi ekhoyo, i-pneumatic, hydraulic, i-hydro-hydraulic kunye nokude kunye nezintambo eziguqulwayo zolawulo lwe-spool kits.
(L / imizuzu) Nom. Umgangatho wohambo
(L / imizuzu) Ubukhulu Umgangatho wohambo
(MPa) Uxinzelelo lwasemva
I-5m) ukuchaneka kokucoceka
SD11 I-Valve yokuLawula isiKhombisi seMonoblock
Edlulileyo: I-SD5 yokulawula iMonoblock
Okulandelayo: Ivelu yeUlawulo lweMonoblock